Osisi Wall - Nzọụkwụ iji mepụta ụdị nke gị | Bezzia
Nzọụkwụ kacha mma iji mepụta 'Gallery Wall' nke gị.
Susana godoy | 12/05/2022 14:00 | Aghụghọ mma
Usoro nke ịchọ mma dị ka 'Mgbidi osisi' bụ otu n'ime ihe na-enweghị atụ nke ị nwere ike ịnye n'ụlọ gị. N'ezie, ị nwere ike ịhazigharị ya mgbe niile ka ọ dị gị mma, ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla ihe ị ga-enweta bụ ịkụ nzọ n'elu mgbidi nke ikekwe na-enweghị nnukwu aha. Ị ga-enye ya ma mepụta ohere mbụ kachasị.
Ọ bụ echiche na na-enye gị ohere ịnakọta akwụkwọ nke ọrụ nka, ncheta ndụ gị, foto ma ọ bụ ihe ọ bụla na-abata n'uche, iji chọọ ohere ahụ mma nke chọrọ ntakịrị ndụ. Yabụ, dabere na nke ahụ, anyị na-ahapụrụ gị ndụmọdụ ma ọ bụ aghụghọ kachasị mma iji mee ya dịka ị tụrụ anya ya.
1 Nzọ na nchịkọta nke nha dị iche iche
2 Hazie ihe mgbagwoju anya etiti
3 Mepụta 'Mgbidi osisi' n'elu shelf
4 Họrọ usoro maka 'Mgbidi osisi' gị
Nzọ na nchịkọta nke nha dị iche iche
Anyị na-achọ ebe okike, ihe na-adịghị agbaso otu iwu ahụ dị ka inwe ike itinye ihe osise di na nwunye. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-ahapụ ihe kachasị mkpa iji nye ndụ ihe okike. Ya mere, nke mbụ, ọ dịghị ihe dị ka ịkụ nzọ na imecha nke dị iche iche nha. Ị nwere ike họrọ mbipụta ndị na-aga n'ime freelụ buru ibu na ndị ọzọ na nke nta. Mana ọ bụ eziokwu na a ga-enwerịrị nguzozi n'etiti ha abụọ. Ị gaghị etinye naanị otu obere na ise buru ibu, n'ihi na ọ ga-adị ka nke na-adịghị mma. Otu ihe ahụ na usoro nke shapes. Ị nwere ike ịhọrọ okpokolo agba square na akụkụ anọ. Ọ bụ ezie na anyị na-ekwu banyere okpokolo agba, foto agaghị aga, mana ha nwere ike ịbụ ihe oyiyi ma ọ bụ mpempe akwụkwọ.
Hazie ihe mgbagwoju anya etiti
Dị ka anyị kwuworo, ihe kachasị mkpa bụ na ihe ndị ị ga-enwe na 'Gallery Wall' gị dị n'ime etiti. Yabụ, ọzọ n'ime nhọrọ nke ị ga-enwe ike inye ndụ na collage na-amasị gị nke ukwuu, bụ ịmepụta ụdị egwuregwu mgbagwoju anya. Ị nwere ike idowe okpokolo agba niile n'ala, nke mere na ha na-etolite otu ibe. Nke a na-abịa pụtara na ị nwere ike ịmepụta nnukwu ọdịdị geometric site na ijikọta ma ọ bụ dabara na okpokolo agba niile, nke nha na ọdịdị dị iche iche. Mgbe ahụ, mgbe ị na-ahazi ya n'ala, ị nwere ike iburu ya na mgbidi. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na-amasị gị, a pụkwara inwe nkewa n'etiti okpokolo agba na ọ ga-abụkwa nhọrọ ọzọ dị mma.
Mepụta 'Mgbidi osisi' n'elu shelf
Mgbe saịtị ahụ dị ntakịrị ma ọ bụ na ịchọghị iji ncheta 'kpuchie' mgbidi ahụ dum, ị nwere ike ime ya n'ụzọ ọzọ dị mfe ma dị ọnụ. Maka ya, Ị nwere ike idowe shelf ma ọ bụ shelf. N'elu ya, ị ga-etinye foto ma ọ bụ okpokolo agba nke ihe ncheta kachasị amasị gị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-emepụta ihe karịrị ihe oyiyi dị egwu nke ga-enye ndụ mgbidi ahụ ma ọ bụ akụkụ ahụ. Ọzọ, ọ dịghị ewute ijikọta nha dị iche iche na ọbụna okpokolo agba nke agba dị iche iche, karịsịa mgbe mgbidi ahụ na-acha ọcha. Ebe ọ bụ na nke a ga-emepụta mmetụta anya mbụ kachasị.
Họrọ usoro maka 'Mgbidi osisi' gị
Mgbe niile anyị kwuru echiche nke iche iche na agba, etiti nha na shapes. Ma, gịnị ka ị ga-eche banyere ịhọrọ ịkwado mgbidi ahụ na otu etiti na agba na nha? Ọfọn, ọ bụ ụzọ ọzọ nke usoro na-esi enweta n'ọkwa ala. Maka ya ị ga-ahọrọ ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba nke ị ga-edowe otu n'akụkụ nke ọzọ na mgbe ahụ, dị n'okpuru ebe na-ahapụghị ohere ọ bụla. okpokolo agba ga-enwerịrị otu agba na udi. N'ezie, n'ime ị nwere ike họrọ ihe ncheta, ihe oyiyi ma ọ bụ nkọwa nke ịchọrọ idobe ndụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka 'Mgbidi osisi' pụta ìhè, gbalịa mee ka okpokolo agba ndị a dị iche na agba nke mgbidi ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Aghụghọ mma » Nzọụkwụ kacha mma iji mepụta 'Gallery Wall' nke gị.
Trend na bridal manicure 2022
Aghụghọ iji mee ka nkwonkwo tile na-acha ọcha